Dib u abaabulka golihii maxkamadaha Islaamiga oo mar kale Muqdisho ka bilwodey – SBC
Dib u abaabulka golihii maxkamadaha Islaamiga oo mar kale Muqdisho ka bilwodey
Golihii maxkamadaha Islaamiga ee awooda badan ku yeeshay gobolada Koonfureed sanadihii 2005/2006 intii aanay awoodooda jabin ciidamadii Itoobiyaanka ee taageerayey xukuumadii C/laahi Yuusuf ayaa mar kale u muuqanaya inay dib isku soo abaabulayaan oo ay ka soo muuqanayaan masraxa siyaasada ee Soomaaliya.
Shir jaraa’id oo ay Muqdisho ku qabteen xubno ka tirsanaa golahaasi ayey ku sheegeen inay wadaan hindise ay dib isagu soo abaabulayaan kooxdaasi, isla markaana ay qaban doonaan dhawaan shirweyne balaaran oo la isagu keeno dhamaan xubnihii golahii maxaakiimta Islaamka.
Kulankaasi waxaa lagu magacaabay gudi soo diyaariya qabashada shirweynaha dib u aasaaska iyo boor ka jifida golihii maxkamadaha Islaamiga, iyadoo kulankii shaley ay ka qayb galeen ku dhawaad 200 qof oo isagu jirey saraakiishii, culma’udiin & aqoonyahano ku mideysnaa fikirkii maxkamadaha Islaamiga
Xisbiga Makamadaha Islaamiga ah oo maanta ku dhawaaqay Guddi ka shaqeeya qaban qaabada shirweyne ay isugu yimaadaan xubnihii Maxkamadaha.
Sh. C/raxiin Ciisa Caddoow oo ahaa afhayeenkii golihii maxkamadaha Islaamka oo ka mid ahaa gudiga loo magacaabay diyaarinta shirweynaha dib u yagleelka maxkamadihii Islaamiga ayaa ku sheegay in sababata dib loogu soo nooleynayo golahaasi ay tahay marxalada kala guurka ah iyo baahida looqabo dowladnimo iyadoo loo marayo nidaamka xisbiyada.
Kulankaasi dadkii ka qayb galey ee ka dhawaajiyey dib u soo nooleysta maxkamadihii Islaamiga waxay u muuqanayeen inay wadaan qorshe golahaasi loogu rarayo nidaam xisbi oo la saan qaada haanka siyaasadeed ee dalka ka jira, waxaana ay sheegeen inay soo dhaweynayaan shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Nairobi ee ay qaramada Midoobay soo qaban qaabisay ee la isagu keenay madaxda maamulada dalka.
Lama oga ujeedada rasmiga ah ee ka dambeysa dib u soo abaabulka golahan, waxaana uu ku soo aadayaa dhaqdhaqaaqan xili la ay soo dhawdahay dhamaadka jiritaanka hay’adaha dawlada federaalka KMG ah, xili la filayo in la qabto shir balaaran oo ay dhici karto in lagu dhiso dawlad cusub, xili ay guulo xoogan ka gaarayaan dagaalada Muqdisho ciidamada dawlada FKMG ah, xili khilaaf siyaasadeed uu ka dhex aloosan yahay madaxda dawlada KMG ugu sareysa.